Fivarotana fivezivezena finday fivezivezena fivezivezena dimy - ZNZK
Toeram-pivoahana tsy manara-penitra vs.
Ny sampana tsirairay dia mahatratra 300 ny fitsidihana isan'andro, trano fidiovana miisa 4 isaky ny trano fidiovana, efitra fandroana 6.
vahaolana Rano / flush Fanjifana rano isan-taona
Toeram-pidiovana mahazatra misintona 5L 13140Ton
Toeram-pidiovana banga 0.4L 1051Ton
Mitsitsy rano 12089 taonina isan-taona ianao.
Tsy mitovy amin'ny trano fidiovana nentim-paharazana miankina amin'ny hery misintona misy azy tahaka ny loharano herinaratra, ny fidiovana tsy misy dikany dia mampiasa tsindry ratsy ho loharano herinaratra. Ny fizotry ny fametrahana fantsona dia afaka manaraka ny endriny ivelany, anatiny mivantana, miolakolaka, ary hatramin'ny lalana ambony sy ambany aza. Tena tsapany fa "ny rano mikoriana miakatra"
Raha ampitahaina amin'ny trano fidiovana nentim-paharazana miaraka amin'ny fomba fanadiovana hafainganam-pandehan'ny hery misintona, ny fantsom-baravarankely dia mampiasa loharano tsindry ratsy -0.035MPA ka -0.055mpa hahazoana antoka fa ampy ny herinaratra hitaterana ny rano manta, ary ampiarahina amin'ny mekanika fanorotoroana hampihenana ny fanentsenana ary ny fandotoana ny fantsona dia kely dia kely, noho izany dia tsy mora ny mangatsiaka.
Madio kokoa sy madio kokoa
Ny fantsona dia ao anaty fepetra mikatona, ka tsy afaka miparitaka ny fofona ary tsy hisy ny gazy sy mikraoba manimba ao amin'ny fantsona.
Little ny fanjifana rano amin'ny trano fidiovana tsy misy dikany dia mampihena mivantana ny fivoahan'ny rano mainty, mampihena ny enta-mavesatry ny fitsaboana rano mainty monisipaly, ary mamaha ny olan'ny rano mainty mivoaka mivantana amin'ny rano voajanahary ao amin'ny fiarahamonina maoderina ary mandoto ny olan'ny loharano; trano fidiovana manangona lamba malotoconcenvoaporofo, miampy fanangonana voaangona miaraka amina zavatra betsaka mifangaro, izay afaka manao zezika biolojika ampiasaina amin'ny fambolena voajanahary. Io dia afaka mamadika ny fako ho harena ary mahazo emission zero. Mamaha ny olan'ny fanodinana ara-nofo ho an'ny tontolo iainana, ary koa amin'ny fanodinana fambolena.
Famaritana trano fidiovana mora vidy mora azo
◎ Ny atitany dia misy rafitra fampandrenesana vonjy taitra, farango akanjo, boatin-tanana, fanamainana tanana, sensor plus plus flushing manual.
◎ Ny firafitra lehibe dia mandray kofehy vy haingam-bovoka avo lenta ho toy ny rafitra iray, ny fotony dia vy vy # #, ny tena fotony dia 120 × 100 fantsom-bozaka fantsona, ny zoro faharoa dia 80 × 40 sy 50 × 50 toradroa fantsom-bozaka, ny tabilao rehetra dia voatsabo amin'ny fitsaboana antikorosiana, ny fitsaboana anti-harafesina amin'ny vy ao amin'ireo faritra nohosorin'ny singa vy dia maharitra ary ny hatevin'ny rindrina dia ambonin'ny 2mm.
◎ Ny rindrina anatiny dia mandray tabilao voasokitra avo lenta ao anaty, ary ny rindrina ivelany dia mandray fitambaran-tabilao plastika vita amin'ny alim-by sy loko vy vita amin'ny vy. Izy io dia manana ny mampiavaka ny fisehoana tsara tarehy, ny fanoherana ny harafesina, ny fanoherana ny asidra sy ny alkaly, ny fanoherana ny fiantraikany, ny fisorohana ny afo ary ny fiainana lava.
◎ Ny taila vita amin'ny seramika tsy avo lenta dia ampiasaina amin'ny gorodona.
◎ Ny tafo dia apetraka fisaka sy tsy tantera-drano ary voaroaka mba hiantohana ny firafitry ny tafontrano feno sy tsara tarehy.
◎ Ny valindrihana ao amin'ny trano fidiovana dia vita amin'ny valindrihana hazo ekolojika, ary ny fidiovana dia malala-tanana sy tsara tarehy iray manontolo.
◎ Ny efitrano fitantanana dia miaraka amina boaty fizarana ankapobeny, switch power, socket, varavarankely amin'ny jiro, tobim-baravarankely mifangaro (ho an'ny fitsaboana insulateur), fitoeran-drano madio ary boaty maloto, izay afaka manome ny filan'ny 2000 ka hatramin'ny 3000 ny olona ao anaty tontolo iainana tsy misy fidiran-drano ary tsy misy loto. Ny mpanjifa dia afaka misafidy ny teny fanafanana sy ny fitehirizana hafanana, ary ny mari-pana manodidina dia -50 ° ka hatramin'ny 40 °.
Teo aloha: Vidiny tsara indrindra amin'ny trano fidiovana tsy misy rano - trano fidiovana - Porcelain - Zhongneng
Manaraka: Toeram-pivoahana ho an'ny trano fidiovana vonjy rano vonjy taitra efatra ho an'ny hetsika efatra izao
Efitrano fidiovana azo entina
Efitrano fidiovana mahomby amin'ny rano
Efitrano fidiovana tsy misy rano
Toeram-pivoahana mamonjy rano